अप्रिल बर्थस्टोन - हीरा रंग - नयाँ अपडेट २०२१
हीरा र रक क्रिस्टल क्वार्ट्ज अप्रिलका लागि जन्मेको पत्थरहरू हुन् जुन अप्रिल ढु stone्गाको र of्गको पुरानो र आधुनिक दुबै सूचीको आधारमा हो। अप्रिल बर्थस्टोन रिंग वा हारको लागि उत्तम रत्न
अप्रिल बर्थस्टोनको अर्थ के हो?
एक जन्मस्टोन एक रत्न हो जुन अप्रिलको जन्म महिनासँग सम्बन्धित छ: हीरा। अप्रिल बर्थस्टोन, हीरा, अनन्त प्रेमको प्रतीकको रूपमा, एक पटक साहस ल्याउने सोचाइ राखिएको थियो।
अप्रिलको बर्थस्टोन रंग के हो?
अप्रिल बर्थस्टोन कहाँ पाइन्छ?
अप्रिल बर्थस्टोन रिंग गहना के हो?
अप्रिल रत्न कहाँ पाउन सकिन्छ?
अप्रिल रत्नको राशिफल के हो?
रक क्रिस्टल क्वार्ट्ज
अप्रिलमा पत्थर सामान्यसँग सम्बन्धित छ रंगहीन रंग त्यो किन हो हीरा अप्रिलको रत्न हो, तर पनि रक क्रिस्टल क्वार्ट्ज, सेतो शीर्षज र सेतो जिकन
यो हीरा अप्रिलको परम्परागत बर्थस्टोन हो र त्यो महिनामा जन्मनेहरूका लागि महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ, पहिरनलाई राम्रो सम्बन्ध प्रदान गर्दछ र भित्री शक्तिमा बृद्धि गर्दछ। लगाउनु हीरे सन्तुलन, स्पष्टता र प्रशस्तता जस्ता अन्य लाभहरू ल्याउनको लागि योजना गरिएको हो। यो अनन्त प्रेमको प्रतीकात्मक पनि हो, र अप्रिललाई जन्मेको महिना भन्नु पर्ने भाग्यशाली मानिसहरूले यस दुर्लभ रत्नको पछाडि निम्न इतिहासको आनन्द लिने छन्।
अप्रिलको लागि बर्थस्टोन अब विश्वभर खानीयो। हीरे 35 XNUMX देशहरूमा पत्ता लगाइएको छ। निम्न देशहरूले औद्योगिक ग्रेड उत्पादन गर्दछन् हीरे: अष्ट्रेलिया, बोत्स्वाना, ब्राजील, चीन, कo्गो, रूस र दक्षिण अफ्रिका।
हामी अप्रिल बर्थस्टोनको घण्टी, ब्रेसलेटहरू, झुम्का, हारहरू र अधिक बेच्दछौं। संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य रत्नहरू मध्ये एक मानिन्छ हीरा लोकप्रिय र सधैंभरि आश्चर्यजनक छ।
त्यहाँ राम्रो छ हाम्रो पसलमा हीरा बिक्री को लागी
अप्रिल ढु stone्गा, हीरा, अनन्त प्रेमको प्रतीकको अलावा, एक पटक साहस ल्याउने सोचाइ राखिएको थियो। संस्कृतमा, हीरा वज्र भनिन्छ, जसको अर्थ बिजुली पनि हो; हिन्दू पौराणिक कथामा वज्र ईश्वर, ईश्वरका हतियार थिए।
मेष र वृषभ पत्थर दुबै एप्रिलको लागि रत्न हो
जुनसुकै पनि तपाई मेष र वृषभ हुनुहुन्छ। हीरा अप्रिल १ देखि 1० सम्मको ढु stone्गा हो।
अप्रिल 1 मेष हीरा
अप्रिल2मेष हीरा
अप्रिल3मेष हीरा
अप्रिल4मेष हीरा
अप्रिल5मेष हीरा
अप्रिल6मेष हीरा
अप्रिल7मेष हीरा
अप्रिल 8 मेष हीरा
अप्रिल9मेष हीरा
अप्रिल 10 मेष हीरा
अप्रिल 11 मेष हीरा
अप्रिल 12 मेष हीरा
अप्रिल 13 मेष हीरा
अप्रिल 14 मेष हीरा
अप्रिल 15 मेष हीरा
अप्रिल 16 मेष हीरा
अप्रिल 17 मेष हीरा
अप्रिल 18 मेष हीरा
अप्रिल 19 मेष हीरा
अप्रिल 20 वृष हीरा
अप्रिल 21 वृष हीरा
अप्रिल 22 वृष हीरा
अप्रिल 23 वृष हीरा
अप्रिल 24 वृष हीरा
अप्रिल 25 वृष हीरा
अप्रिल 26 वृष हीरा
अप्रिल 27 वृष हीरा
अप्रिल 28 वृष हीरा
अप्रिल 29 वृष हीरा
अप्रिल 30 वृष हीरा
हाम्रो रत्नको पसलमा बिक्रीको लागि प्राकृतिक अप्रिल बर्थस्टोन
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्टहरू ... को रूपमा हामी अप्रिल बर्थस्टोन गहना बनाउँछौं। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।